Mushure memakore mashanu ekutsvagisa nekusimudzira, HeeChi Tech yakawana ruzivo rwehunyanzvi uye kumhara kwemakumi mana emvumo mumidziyo isingabatanidzwe yekudziya yekusvuta, uye ine mamiriro ekutanga ekugadzira moat patent.
Isu tine maflavour akajairwa seChekutanga, Mint Blast uye Blueberry, uye isu tine mamwe akakosha maflavour seTangerine Peel Blast uye Kofi kuravira kwesarudzo yako.
PURE HeeChi Kofi, yakachena kofi chiitiko.Kuti tiwane kunhuhwirira kwakanaka kwekofi, takaedza marudzi anopfuura makumi matatu ebhinzi dzekofi kubva kumakondinendi matatu, uye pakupedzisira takatengesa Geisha kubva kuEthiopia.A chaiyo SELLECTED falvor, inokubatsira kuti udzikame uye uenderere mberi nehupenyu hwezuva nezuva.
Kana uri kekutanga kuedza zvigadzirwa zveHNB, unogona kuedza kubva kunakirwa nekofi.Sezvo vazhinji vedu tichizonwa kofi mazuva ese, zvichava nyore kugamuchira kubva kune yedu yatinoziva kuravira.
Kunyange zvazvo nyika dzakasiyana-siyana dzakatevedzana dzakaunza mitemo yekutonga pa e-fodya, chido chekusimudzira indasitiri yefodya chinoramba chiripo.Kukura kwakasimba kwemusika wepasi rose we-e-fodya kunonyanya kukonzerwa nekuwedzera kugamuchirwa kwezvigadzirwa zve-e-fodya nevatengi, zviitiko zvekushambadzira zvemakambani efodya, uye kukurumidza kwehunyanzvi uye kuvandudzwa kwechigadzirwa nevagadziri vefodya.
Zvakapfuura: HEECHI Blueberry Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Zvinotevera: HEECHI Mint Blast Isiri-Nicotine HNB Herbal Stick
Zita reChigadzirwa: HEECHI Kofi Isiri-Nicotine HNB Herbal Stick
Kushandisa: Shandisa Kupisa Kusina Kupisa kupisa mudziyo